Iingqungquthela ezili-Eleven eziBaziwayo kunye neziBuddhist ezintle
1. Taktsang: Indlala kaTiger
Isihlamba seTiger okanye i-Taktsang Monastery eParo, eBhutan. © Albino Chua / Getty Izithombe
I-Taktsang Palphug Monastery, ebizwa ngokuba yiParo Taktsang okanye I-Tiger's Nest, ifake kwi-cliff engaphezulu kwamawaka angama-10 kwii-Himalaya zaseBhutan. Ukusuka kule ndwendwe kukho u-3,000 weenyawo ezinqabileyo kwiPara Valley, ngezantsi. Izakhiwo zetempile zangaphambili zakhiwa ngo-1692, kodwa iimbali ezungeze iTakatza zininzi kakhulu.
I-Taktsang ibonisa ukungena komqolomba apho iPadmasambhava kuthiwa ukucamngca iminyaka emithathu, inyanga ezintathu, iiveki ezintathu, iintsuku ezintathu kunye neeyure ezintathu. I-Padmasambhava idityaniswa ngokuzisa iimfundiso zobuBuddha kwiTibet naseBhutan kwikhulu le-8.
2. I-Sri Dalada Maligawa: Ithempeli lezinyo
Izindlovu ziboniswa emnyango wetempile yezinyo, uKandy, eSri Lanka. © Andrea Thompson Photography / Getty Izithombe
Indlu yezinyo eKangy yakhiwa ngo-1595 ukuba ibambe enye into engcwele kuyo yonke iSri Lanka - inyo yeBuddha. Kuthiwa izinyo ziye zafikelela eSri Lanka kwikhulu le-4, kwaye kwimbali yayo enzima iqhutywe kaninzi kwaye yabiwe (kodwa ibuyele).
Lezinyo azizange zishiye itempile okanye ziboniswe kuluntu ixesha elide. Nangona kunjalo, zonke ihlobo zibhiyozelwa kumthendeleko obalaseleyo, kwaye i-replica yezinyo ifakwa kwi-casket yegolide kwaye ithathwa ngezitalato zaseKandy ngasemva kwendlovu enkulu kwaye ihlotshiswe ngokucacileyo, ifakwe izibane.
Funda ngakumbi: Inyosi kaBuddha
3. I-Angkor Wat: Ubuncwane obude obufihlakeleyo
Ithempeli elidumileyo likaTha Prohm e-Angkor Wat, eCambodia apho iingcambu zeemithi zihlala zidibanisa nalezi zakhiwo zamandulo. © Stewart Atkins (ebonwayoSA) / Getty Izithombe
Xa kwakhiwa ukwakhiwa kwe-12 ye- Cambodia yase- Angkor Wat iCambodia yayijoliswe ukuba ibe yindempile yamaHindu, kodwa yaphinde yaxhaswa kwiBuddhism ngekhulu le-13. Ngelo xesha kwakukho entliziyweni yombuso waseKhmer. Kodwa ngekhulu le-15 leminyaka ukunqongophala kwamanzi kwabangela ukuba iKhmer ifuduke, kwaye itempile elihle lashiywa ngaphandle kwabanamonki abancinci bamaBuddha. Ekuhambeni kwexesha elikhulu le tempile laphinde lafunyanwa yihlathi.
Iyaziwayo namhlanje ngobuhle bayo obuhle kwaye ibe yikhumbuzo esikhulu senkolo kwihlabathi. Nangona kunjalo, kwada kwaphakathi kwe-19 leminyaka kwaziwa kuphela kwiCambodians. AmaFrentshi ayamangalisa kakhulu ubuhle kunye nobuchule bethempelini eyayonakalisiweyo abazange bayikholelwe ukuba yayakhiwe yiKhmer. Ngoku iindawo zeLifa leMveli le-UNESCO, kwaye umsebenzi wokubuyisela itempile uyaqhubeka.
4. I-Borobudur: Ithempeli elikhulu elilahlekile kwaye lafunyanwa
I-Sunrise eBorobudur, Indonesia. © Alexander Ipfelkofer / Getty Izithombe
Le tempile enkulu yakhiwa kwisiqithi sase-Indonesian saseJava kwikhulu le-9, kwaye nanamhlanje ithathwa njengetempile enkulu eBuddhist emhlabeni jikelele (Angkor Wat nguHindu noBuddha). I-Borobudur ihlanganisa iihektare ezili-203 kwaye iqukethe iiplati zezithandathu zesikwele kunye neesithathu, zifakwe ngumbumba. Ihlotshiswe ngee-2,672 zokuphucula iipaneli kunye namakhulu amafoto aseBuddha. Injongo yegama elithi "Borobudur" lilahlekile lixesha.
Ithempeli elipheleleyo laliphantse lilahlekelwe ixesha. Yashiywe ekhulwini le-14 kunye netempile ehle kakhulu yabuyiselwa yihlathi kwaye lilibalekile. Yonke into eyayibonakala ihlala ingumxholo wendawo weentaba eziwaka. Ngowe-1814 igosa laseBrithani laseJava lava ibali leentaba kwaye, laxhamla, lalungiselela ihambo lokuyifumana.
Namhlanje i-Borobudur yiNdawo yeLifa leMveli yeZizwe eziManyeneyo kunye nendawo yokuhambela amaBuddha.
5. Shwedagon Pagoda: U-Inspirer of Legend
Iinqaba ezinkulu ze-Golden Golden Stupa ngaphezu kwe-Shwedagon Pagoda. © Peter Adams / Getty Izithombe
I-Shwedagon Pagoda enkulu yaseYangon, iMyanmar (iBurma) yinto enokholo, okanye i- stupa , kunye netempile. Kukholelwa ukuba iqulethe imithwalo yezinto ezingaphelelanga nje kuphela kwiBuddha yembali kodwa nakwabaseBuddha abathathu ababengaphambi kwakhe. I-pagoda ingama-99 amamitha awela kwaye agutywe ngegolide.
Ngokomxholo waseBurma, i-pagoda yangaphambili yakhiwa ngamashumi amabini anesibini edlulileyo ngukumkani obenokholo olutsha uBuddha wazalwa. Ngethuba lokulawula kwakhe abazalwana ababini beentengiso badibana noBuddha eIndiya baza bamxelela malunga neentlanga ezizakhelekileyo. UBuddha wada wathabatha izibhozo ezisibhozo zakhe ukuba zihlale kwi-pagoda. Xa i-casket enezinwele ivuliwe eBurma, kwenzeka izinto ezininzi ezimangalisayo.
Izazi-mlando zikholelwa ukuba i-pagoda yasekuqaleni yayakhiwe ixesha phakathi kwekhulu le-6 nele-10. Kuye kwaphinda yakhiwa eziliqela izihlandlo; isakhiwo esele sakhiwe emva kwenyikima ekhutshwe phantsi kwangaphambili ngo-1768.
6. I-Jokhang, iTempile eNgcwelisayo yeTibet
Iimonki zixubusha kwiTempile yaseJokhang eLhasa. © Feng Li / Getty Izithombe
Ngokomlando, iJokhang Ithempeli eLhasa yakhiwa ngekhulu le-7 nguKumkani waseTibet ukukholisa ababini abafazi bakhe, umthetheli waseChina kunye nentombikazi yaseNepal, ababengamaBuddha. Namhlanje iimbali-mlando zisitshela i-princess yaseNepal mhlawumbi ayikho. Nangona kunjalo, iJokhang ihlala isigxina ekuqalisweni kweBuddhism kwiTibet.
Inkosikazi yaseTshayina, i-Wenchen, yazisa naye umfanekiso oye watyhilwa nguBuddha. Umfanekiso, othiwa yiJowo Shakyamuni okanye uJowo Rinpoche, uthathwa njengento engcwele kakhulu kwiTibet kwaye ihlala iJokhang kuze kube namhlanje.
Funda ngakumbi: Indlela uBuddhism eya ngayo kwiTibet
7. I-Sensoji kunye neSiteli seNgcaciso segolide
Imbali e-Asakusa Senso-ji, eTokyo, ngentsasa. © Future Light / Getty Izithombe
Kudala, malunga no-628 CE, abazalwana ababini abaloba kuMlambo waseSumida bathabatha umfanekiso wesigxina segolide waseKanan, okanye iKannnon, i- bodhisattva yenceba . Ezinye iinguqu zeli bali zithi abazalwana baphinda babuyisele imifanekiso emfuleni ngokuphindaphindiweyo, kuphela ukukhangela kwakhona.
I-Sensoji yakhiwe ngokuhlonipha i-bodhisattva, kunye nesithomo esincinci segolide sichazwa apho, nangona isithunzi esingabonwa nguwonkewonke sivunyiwe. Itempile yokuqala yagqitywa ngo-645, okwenza ithempeli elidala kunazo zonke eTokyo.
Ngowe-1945, ngexesha leMfazwe Yehlabathi II, iibhomu ezahla kwi-American B-29 zabhubhisa kakhulu iTokyo, kuquka uSensoji. Isakhiwo samanje sakhiwa emva kwemfazwe ngeminikelo evela kubantu baseJapan. Kwimimandla yetempile kukho umthi okhulayo ukusuka kwiintshaba zomthi obanjwe ibhomu. Umthi uthandwa njengophawu lomoya ongathethiyo we-Sensoji.
Funda ngakumbi: Iimpawu zobuBuddha zamaBhuda zaseJapan
8. Nalanda: Isiko elilahlekileyo lokuFunda
Amanxuwa aseNalanda. © De Agostini / G. Nimatallah
Kwiinkulungwane ezisibhozo emva kokutshatyalaliswa okubuhlungu, uNalanda uhlala esona sikhundla esiphambili kunazo zonke kwimfundo yobuBuddha. Efumaneka kwimeko yangoku ye-Bihar yaseIndiya, kwi-Nalanda yimihla yohlobo lwabafundisi balo bathanda abafundi behlabathi lonke laseBuddhist.
Akucaci xa i-monastery yokuqala eyakhiwa e-Nalanda, kodwa kubonakala sengathi enye ikhona ngekhulu lesi-3 CE. Ngenkulungwane ye-5 bekuye kwaba ngumtsalane kubaphengululi bamaBuddhist kwaye bekhulile ibe yinto efana neyunivesithi yanamhlanje. Abafundi ababengekho kuphela bafunda ubuBuddha kodwa kunye neyeza, ukubhula ngezinkanyezi, imathematika, ingcamango kunye neelwimi. UNalanda wahlala yindawo ephakamileyo yokufunda de kube ngu-1193, xa yachithwa ngumkhosi wamaMaslim eTurkey ase-Asia ephakathi. Kuthiwa ilayibrari enkulu yeNalanda, egcwele imiqulu engapheliyo, ikhutshwe ngeenyanga ezintandathu. Ukutshatyalaliswa kwalo kwaphawula nokuphela koBuddha eNdiya kude kube ngamaxesha anamhlanje.
Namhlanje amanxuwa atyhidiweyo angahanjelwa ngabakhenkethi. Kodwa inkumbulo kaNalanda isakhangele ingqalelo. Okwangoku abanye abaphengululi bakhulisa imali yokwakha kabusha iNalanda entsha kufuphi namanxuwa endala.
9. USolin, iKhaya leZen kunye neKang Fu
I-monk iindlela ezingenziwa kwi-Temple ye-Shaolin. © China Photos / Getty Izithombe
Ewe, iThempeli laseShayina iThaolin yindempile yobuBuddha yangempela, kungekhona inkolelo eyenziwe ngamafilimu e-karate. Iimonki apho ziye zenza ubugcisa be-kartial kwiinkulungwane ezininzi, kwaye zakha isitayela esiyingqayizivele esabizwa ngokuthi uShaolin kung fu . I-Zen Buddhism yazalwa apho, eyasungulwa nguBodhidharma , owayeze eChina esuka eNdiya ekuqaleni kwekhulu le-6. Awufumani ngaphezu kweSololin.
Imbali ithi uShaolin wasungulwa okokuqala ngo-496, iminyaka embalwa ngaphambi kokuba uBodhidharma afike. Izakhiwo zakhiwo zeendwendwe ziye zaphinda zakhiwa ngokuphindaphindiweyo, ngoku kutshanje emva kokuba zityhutyhwe ngexesha leNkqubela yeNkcubeko .
Funda ngakumbi: Abagadi beMfazwe be-Shaolin ; ZobuGcisa beZen
10. I-Mahabodhi: apho iBuddha iQinisekisa ukuKhanya
Ithempeli laseMahabodhi libonisa indawo apho iBuddha yaqaphela ukukhanya. © 117 Imifanekiso / Getty Izithombe
Ithempeli laseMahabodhi libonisa indawo apho uBuddha ehleli phantsi komthi waseBodhi waza wafumanisa ukukhanya , ngaphezu kweenkulungwane ezingama-25 ezedlulileyo. "Mahabodhi" kuthetha "ukuvusa okukhulu." Eceleni kwetempile umthi uthe wanyuswa ukusuka kwisitampu somthi waseBodhi wokuqala. Umthi nethempile zihlala eBodhgaya, kwimeko yase-Bihar yaseIndiya.
Indlu yokuqala yaseMahabodhi yakhiwa nguMbusi uAshoka malunga ne-260 BCE. Nangona kubaluleka kubomi bukaBuddha, le ndawo yayishiywe emva kwekhulu le-14, kodwa nangona kungakhathaliseki ukuba yinto engapheliyo yinto yamatye endala kunazo zonke eIndiya. Yabuyiselwa kwinkulungwane ye-19 kwaye ikhuselwe namhlanje njengeNdawo yeLifa leMveli ye-UN.
Umbhalo wamaBuddhist uthi uMahabodhi uhleli kwiinqanawa zehlabathi; xa ihlabathi libhujiswa ekupheleni kwexesha kuya kuba yindawo yokugqibela yokusabalalisa, kwaye xa ihlabathi elitsha lithatha indawo yale ndawo, le ndawo iya kuba yindawo yokuqala yokubuyela kuyo.
Funda ngakumbi: I- Mahabodhi Temple
Funda ngakumbi: Ibali likaBuddha's Lighting
11. I-Jetavana, okanye i-Jeta Grove: I-First Buddhist Monastery?
Umthi wase-Anandabodhi eJetavana kuthiwa ukhulile ukususela kwisitampu somthi waseBodhi wokuqala. IBpilgrim, i-Wikipedia, i-Creative Commons License
Amanxuwa aseJetavana yinto eseleyo yintoni eyayibe yindwendwe yaseBuddhist yokuqala. Nanku uBuddha wembali wanikela ezininzi iintshumayelo ezirekhodiweyo kwi- Sutta-pitaka .
Jetavana, okanye iJeta Grove, apho umfundi u-Anathapindika uthenge umhlaba ngaphezu kweenkulungwane ezingama-25 ezedlulileyo waza wakha indawo yokuba uBuddha kunye nabalandeli bakhe baphile ngexesha lemvula. Ngomnye umnyaka uBuddha nabafundi bakhe bahamba besuka kwidolophana baya kwidolophana, befundisa (bona " Iimonki zokuqala zeBuddhist ").
Isayithi namhlanje ipaki yesiganeko, e-Indian state yase-Uttar Pradesh, efikelela eNepal. Umthi esithombeni kuwuMthi we-Anandabodhi, okholelwa ukuba wenyuka ukusuka kwintsika yomthi owawukhusele uBuddha xa eqonda ukukhanya .
Funda okunye : Ukuhlaziywa kwe-Anathapressed, uMncedi Omkhulu
I-7 Dalai Lama, uKelzang Gyatso
I-Supermassive Black Holes: i-Galactic Behemoths
Abantu baseMelika abaMnyama abaMthethweni abaPhumela ngaphaya kwe-11 Million
Tajikistan | Iinkcukacha kunye neMbali
Ubungqina beTwin Telepathy
Yintoni i-Laetare ngeCawa Ngethuba lokuLenta?
Iingcali zeSayensi zeMbuzo neempendulo
I-Buddha's Raft Parable
Ukusebenzisa iBharre: I-Ballet idibanisa
Abaqeqeshi beqela le-USA